Itoobiya Oo Rabta Iney Ku Biirto Howlgalka Midowga Afrika Ee Soomaaliya “AMISOM” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Itoobiya Oo Rabta Iney Ku Biirto Howlgalka Midowga Afrika Ee Soomaaliya “AMISOM”
MAREEG 10 November 2013 4 April 2019
Addis Ababa, November 10, 2013: R/wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dalkiisa ee ku sugan gudaha Soomaaliya ay ku biiri doonaan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Hailemariam Desalegn ayaa sheegay in ciidamdiisu ku biiri doonaan ciidamada ciidamada AMISOM ee dagaalka kula jira Alshabaab, iyadoo arrintaas qeyb ka tahay sida uu yiri dadaalka lagu cusbooneysiinayo dagaalka kooxaha mayalka adag looga saarayo Geeska Afrika.
R/wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaaa hadalkaan jeediyey xilli uu xafiiskiisa magaalada Addis Ababa ku qaabilay madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya, William Ruto.
Hailemariam Desalegn ayaa sheegay in saraakiisha ugu sareeya dhanka amaanka ee dalkiisa ayba dhigooda Kenya la bilaabeen wada hadal ku saabsan Istiraatiijiyaddii Itoobiya ugu biiri laheyd howlgalka AMISOM.
Desalegn ayaa sheegay iney jiraan hanjaabdo soo cusboonaaday oo uu yiri waxey ka imaanayaan kooxo argagixiso ah, wuxuuna xusay in Itoobiya ka qeyb qaadaneyso howlgal wadajir ah oo ka dhacaya furmo badan, kan dhan argagixisada Geeska Afrika.
“Waxaa jira hanjbaado argagixiso oo cusub kuwaasoo soo gaaray Itoobiya, hajnbadaas waa dhab, waxaana howlgalkaani noqonayaa mid wadajir loo qaadayo si loo tirtiro argagixisada, howlgalka iyaga ka dhanka ahna wuxuu ka socon doonaa dhamaan furumaha” ayuu yiri R/wasaaraha Itoobiya Desalegn.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya, William Ruto oo isaguna hadlay ayaaa sheegay iney Kenya sido culeys badan oo sida uu yiri argagixiso ku heyso, wuxuuna soo dhaweeyey go’aanka Itoobiya kula biireyso AMISOM.
“Dhawaanahan waxaa nagu dhacay weeraro argagixiso oo dad ku dhinteen dad kalana ku dhaawacmeen, waxaana soo dhaweyneynaa dedaal kasta oo kooxahaas lagula dagaallamayo” ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo ay soo xogatay Jariidada The Satandrd ee kasoo baxda Kenya.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya, William Ruto ayaa sheegay in ololaha lagu ciribtirayo kooxaha mayalka adag ay qeyb ka tahay dib u celinta ilaa 1 Milayn qaxooti Soomaali ah oo ku nool gudaha Kenya, iyadoo arrintaas ay la kaashanayaan dowladda Soomaaliya iyo UNHCR.
Golaha Amanaaka Midowga Afrika iyo Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa dhawaan ogolaaday in ilaa 4,000 aksari lagu kordhiyo howlgalka AMISOM, waxaana muuqata in Itoobiya dooneyso iney qaadato tiradaas lagu soo kordhinayo AMISOM ama qeyb ka hesho.
Ciidamada howl galka AMISOM oo hada gaaraya ilaa 17-kun askari ayaa waxaa qeyb ka ah dalalka Uganda, Brundi, Kenya, Jabuuti iyo Sierra Leone, iyadoo Nigeria iyo Ghana ay ka joogaan ciidamo boolis ah.
Ethiopian troops to join AMISOM
Madaxweyne Xasan: Siyaasada Aan Riixeyno Waa In Dowladda Soomaaliya Ka Taliso Min Raas Caseyr Ilaa Raas Kambooni